3PLY HAMMERED COPPER CLAD BODY FRYPAN-SC062 - နယူးရှိုင်းဟတ်စက်
နေအိမ် » ထုတ်ကုန် » 3PLY HAMMERED COPPER CLAD BODY FRYPAN-SC062 » အားလုံးခင်းထည်အိုးထဲ့ » 3PLY HAMMERED COPPER CLAD BODY FRYPAN-SC062
This frypan is made of 3-ply composited material steel & copper all clad ,with fast and even heat retention and suitable for all heat sources, ထူနံရံများနှင့်အတူပိုကောင်းအပူစီးကူး,The inside of pot has detailsed capacity marks,different sizes are available.
ပုံစံ: Cut edge casserole.
ကိုယ်ခန္ဓာ: composited 3ply all clad copper
သတ္တုအမျိုးအစား: 3Ply composited steel&copper all clad
ဖွဲ့စည်းမှု: 3ply steel&copper composite body
ထုပ်ပိုး: အဖုံးနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ယက်မဟုတ်သောအိတ်, out gift box packing.
မော်ဒယ် 3PLY HAMMERED COPPER CLAD BODY FRYPAN-SC062
ပစ္စည်း 304 0.5မီလီမီတာ + alu. 1.5မီလီမီတာ + ကြေးနီ 0.5mm